Ingcebiso ngoomama-iBezzia | IBezzia
Ukuba kukho into enye eyenza ukuba abantu ababhinqileyo bahluke, kukukwazi kwabo ukwenza njalo yiba ngoomama. Kungenxa yoko le nto xa lo mzuzu ufika, sonke sifuna ukuba phezulu kulo msebenzi kwaye senze konke okusemandleni ethu. Kuba akukho mfuneko yokuba siyenze sodwa, sivela eBezzia sifuna ukudlulisa ulwazi lwethu ngesihloko kwaye sifake igalelo iingcebiso kunye neengcebiso ezikunceda ukuba unike abantwana bethu eyona mfundo kunye nobomi obunokubakho.
Phakathi kweengcebiso zokuba ngumama, siza kubona indlela yokujongana namanqanaba ahlukeneyo omntwana, iingxaki ezinokuvela ngentetho okanye izifo kunye nokucinga malunga nendlela yokujongana nomona phakathi kwabantakwenu okanye udlale nabahlobo.
Amanyathelo ama-3 okulumla ngentlonipho
Xa kufika ixesha lokulunyulwa, uloyiko oluninzi, amathandabuzo kunye neenkxalabo zivela. Kwelinye icala, iimvakalelo zendalo zibonakala ngathi...
Yonke into umama omtsha kufuneka uyazi
Le yiyo yonke into umama omtsha afuna ukuyazi ukuze onwabele ukuba ngumama owonwabileyo. Kuba ngamanye amaxesha, ngakumbi…
Xa uhambisa umntwana ukusuka kwimbeleko ukuya ebhedini?
Ukushenxisa umntwana emzalweni ukuya ebhedini kunokuba buhlungu, kubazali nakuwe…
Iingxaki ezahlukeneyo zokuncancisa
Ukuncancisa sisipho sobomi, okona kutya kulungileyo okunokufunyanwa lusana kunye nendlela...
Iingcebiso ezi-3 zokuthintela i-cavities kubantwana
I-Caries ixhaphake kakhulu kubantwana, enyanisweni, yingxaki yomlomo eqhelekileyo ebuntwaneni. Oku...
Umoya omdaka ebantwaneni, oonobangela kunye nothintelo
Abantwana nabo banokuphefumla kakubi kwaye isoloko ibangelwa zizizathu ezinokuthintelwa. Nangona kubonakala ngathi ...
Iingcebiso zobuhle ezikhawulezayo zoomama abaxakekileyo
Ukuba ngumama akungqubani nenkathalo enxulumene nobuhle, okanye ubuncinci akumele kube njalo. Khathalela i…
impilo ngokwesondo emva kokukhulelwa
Xa ukubeleka kusondele, abafazi bahlala becinga ngazo zonke iintlobo zezinto, ngaphandle kokubuyisela…
Iingcebiso ngokujonga umsebenzi emva kokubeleka
Ukukhangela umsebenzi emva kokuba ngumama kunokuba nzima kakhulu, ngokwenene. Akukho lula kubasetyhini ukufumana…
Ngaba kubi ngabantwana ukuhamba benganxibanga zihlangu ekhaya?
Bekusoloko kukho impikiswano malunga nombandela wokuba kulungile na ukuba abantwana banxibe izihlangu okanye bahambe…
Ndifuna ukuba ngumama owonwabileyo, imikhwa yokuyifezekisa
Ukuba ngumama ayisiyobhedi yeerozi, yinkimbinkimbi, igcwele imiqobo kunye ne-roller coaster yeemvakalelo...
Kutheni isondo libuhlungu emva kokubeleka